R & D Team - Southern ibengezela Wearable Technology Co., Ltd.
Iziko R & D ubunjwe yoyilo Fashion, mechanical, elektroniki, isoftware, uvavanyo kunye nolawulo lweprojekthi.
1. Iqela kwidizayini ezizodwa kuyilo style yokunxiba kunye nokwenza isampuli njengoko isicelo abathengi 'okanye uphuhliso self.
2.The iqela mechanical ezizodwa 3D indalo kunye noyilo umngundo.
3. Iqela ngekhompyutha ezizodwa kwisekethe lwedijithali, LF wesekethe ngumntu, HF (RF) kwisekethe kunye namandla electronic kuyilo wesekethe.
4. Iqela software ezizodwa kwi firmware MCU / DSP eqhagamshelweyo, isicelo PC, candani isicelo kunye iOS / uyilo isicelo Android.
5. Iqela Uvavanyo ezizodwa kuvavanyo ezicacileyo ukuqinisekisa kuyilo ogqibeleleyo.
6. Iqela PM ezizodwa kulawulo kwawo, izixhobo, iindleko / iindleko nexesha ukuqinisekisa zonke zeprojekthi kugqitywa ngexesha elililo nangendlela efanelekileyo.
Emsebenzini kunye Instruments:
Iziko R & D has 520 ofisi imitha isikwere kunye lab. Le ndawo ukusebenza nice kwaye axhotyiswe izinto ngezantsi:
Siya kugxininisa beqokelela epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Wada lonyaka-2 ka-2018, safumana 18 amalungelo awodwa omenzi wechiza fyabo, 28 eluncedo imodeli amalungelo abenzi kwaye 4 amalungelo abenzi inkangeleko, ekubuphleleliseleni uphando 2 Iprojekthi nenzululwazi kwicandelo nenzululwazi & nobuchwepheshe kwe Dongguan kunye nokwahlula amancinci / medium lweshishini of Dongguan. Kwelinye icala, thina namanye amalungelo awodwa omenzi wechiza fyabo entsha ezininzi model eluncedo patent kusalindwe.
Ngenxa imveliso R & umsebenzi D ngumsebenzi onzima, yaye abantu abanenxaxheba R & D kufuneka ezizodwa embusweni ethile, R yethu & D ulawulo usebenzisa ulwabiwo yabasebenzi matrix, chaza abasebenzi nganye projekthi ilungiselelo oxwesileyo kwaye ucacise italente nkqo kwi isifundo esithile ilungiselelo nkqo . Kulawulo lweprojekthi tye, siye sabelwa lowo uqhelene ubume imveliso kunye nokusebenza, kwakunye kakuhle ulwabiwo kunye nokulungelelaniswa kwemithombo. ubukhulu becala benziwa ingcali iteknoloji okanye ingcali kulawulo oluphezulu. Kulawulo lweprojekthi nkqo, sisebenzisa lowo uqhelene ngolwazi imveliso, kwanciphisa inzululwazi kunye nobunjineli amandla okucinga kunye nenkqubo yemveliso. Uninzi lwabo engineer kakhulu.
Ukufudumeza Pad , ibhulukwe shushu, 'uthuli Vest, 12v iingxoxo ezitshisayo zebanga Car Seat ababetheki, iingxoxo ezitshisayo zebanga Insoles zitshajwe , Jacket shushu ,